Ehellada nin Amisom ay Muqdisho ku dileen oo DF Soomaaliya eedeeyay - Caasimada Online
Home Warar Ehellada nin Amisom ay Muqdisho ku dileen oo DF Soomaaliya eedeeyay
Ehellada nin Amisom ay Muqdisho ku dileen oo DF Soomaaliya eedeeyay
Muqdisho (Caasimada Online)- Magaalada Muqdisho waxaa shir weyn ku qabtay qoyska uu ka soo jeedo nin rayid ah oo dhawaan ciidanka AMISOM ay ku dileen magaalada Muqdisho.
Ninkan ayaa waxaa jiiray mid ka mid ah baabuurta AMISOM, waxaana uu xilligaas marayay waddada Makkah Al-Mukarramaha ee magaalada Muqdisho.
Suldaan Dhiire Muxumad Nuuriyoow, oo ehel la ah marxuumka geeriyooday,ayaa sheegay in arrintooda muddo dheer ay ka wareegtay siddii loo dhahay waxbaa la idiin qabanaa laakin ilaa hadda cid ka soo jawaabtay ma lahan.
Wuxuu kaloo sheegay in cabashadooda ay markii horre ku wareejiyeen taliska ciidamada ilaalada waddooyinka, balse ay ka soo wareegtay oo la hor geeyay golaha wasiirada Soomaaliya sidda uu sheegay.
Wuxuu Suldaanka ka sheekeeyay xaalada ay ku sugan yihiin qoyska uu ka geeriyooday marxuumka ay dileen AMISOM, wuxuuna tilmaamay inay meel khatar marayso isagoo tilmaamay in aaney heesan wax noloshooda ay ku maareeyaan.
Ugu dambeyn wuxuu golaha wasiirada xukuumada Soomaaliya ugu baaqay in ay wax ka qabtaan kiiska lagu wareejiyay, maadama AMISOM ay si bareer ah u dileen wiilkooda.
Akhriste halkan ka daawo sawirrada qoyska uu ka dhintay marxuumka.
Qoyska uu ka dhintay nin AMISOM ay ku dishay Muqdisho